Japàna: Ilay Kiririokan’ny Ao Afovoany Atsinanana · Global Voices teny Malagasy
Japàna: Ilay Kiririokan'ny Ao Afovoany Atsinanana
Voadika ny 23 Mey 2017 5:18 GMT
Karazana fanatanjahantena mahasarika ny sain'ny haino aman-jery sy ny vahoaka amin'ny ankapobeny ny lalao handball tsy toy izay nisy tao Japàna tany aloha tany, sy tany Korea. Vaky masoandro ny disadisa rehefa injay i Korea sy Japàna samy nangataka ny Federasiôna Iraisampirenen'ny taranja Handball mba hamerina ny lalao fifanintsanana ho an'ny Lalao Olaimpika, faritra Azia noho ireo fitsaràna mampisalasala nataon'ilay mpitsara lalao. Ny honohono dia milaza hoe novain'ny Asian Handball Association (AHF), eo ambany fitarihan'ilay Koetiana Sheikh Ahmad Fahad al-Sabah, ho mpitsara avy ao Afovoany Atsinanana ireo mpitsara Eoropeana, taloha kely monja hanaovana ireo lalao hifanandrinan'i Koety amin'i Japàna sy Korea mba hampitanilàna ny lalao ho any amin'i Koety.
Raha somary niha-ratsiratsy ihany no fahitàna ilay fifandirana, ireto no tenin'ireo Japoney bilaogera sasany.
We Are Family manakiana ilay lazaina ho “Kiririokan'ny Ao Afovoany Atsinanana” ary mihevitra fa ny toetoetry ny vahoaka Japoney no mety nitàna anjara toerana tamin'ny zavatra rehetra niseho:
Ity zavatra antsoina hoe “Kiririokan'ny Ao Afovoany Atsinanana” ity, fitondrantena tsy azo ekena amin'ny resaka fanatanjahantena… Izaho manokana dia mino fa ny fanatanjahantena dia tokony tsy hofehezin'ny vola na ny fahefana ary tokony hitovy ho an'ny rehetra…
Araka izany, nahoana no ametrahana fanontaniana indray ny momba izany ankehitriny? Tsy efa nisy ve izany tany aloha? Hoy aho… Heveriko fa tsy ampy fanamafisana ny maha-izy azy ny vahoaka Japoney. Mila nieritreritra ny Japoney na dia nahazo fitsaràna nitanila aza, tsy misy na inona na inona azony atao intsony momba azy iny. Heveriko fa izany no maha-samihafa ny Japoney sy ny fomba fisainana vahiny (soatoavina). Eny, heveriko fa mbola betsaka ny zavatra tokony hovain'ny Japoney mba hifaninanana amin'izao tontolo izao….Ataovy izany Japàna a!
Sports News manipika hoe tsy ao Afovoany Atsinanana ihany no ahitàna fitsaràna mitanila fa raharaha fahita amin'ny fanatanjahantena rehetra io.
Ity fomba fiteny ity “Kiririokan'ny Ao Afovoany Atsinanana” , dia nanomboka nisarika be ny saina tampoka teo, saingy tsy tao AfovoanyAtsinanana ihany — ny fomba fitsara hanomezana tombony ny tarika avy eo an-toerana dia nantsoina hoe “fanapahankevitra avy any an-tanàna”. Eo amin'ny sehatry ny matianina, misy ireo tranga izay ahitàna izany mivandravandra any amin'ny ady totohondry. Ohatra, ilay lalao voalohany nifandonan'i Kameda Koki sy Juan Landaeta dia noheverina ho iray tamin'ireny. Lasa olana goavana ilay izy satria nanamarika taham-pijerena iray tsy mbola nisy toa azy ary marobe ireo vao mirotsaka eo amin'ny sehatry ny ady totohondry no nijery ilay lalao tao amin'ny TV, saingy rehefa milalao any ampitan-dranomasina ny Japoney (na dia tsy voafetra ho ny Japoney ihany aza), tsy mahazatra loatra ny hoe mahatàna ny ranomasony ireo mpilalaony rehefa mirona mankany amin'ny mpilalao eo an-toerana ny fitsaràna.
Mendrika fanakianana ny “Kiririokan'ny Ao Afovoany Atsinanana”, saingy tsy azoko antoka ny fangatahana fanadiovana tanteraka ireo lalao ara-panatanjahantena. Angamba ireo fantsom-pahitalavitra no tena mahita fifaliana, dia izy ireo izay manana votoaty afaka hahazoany taham-pijerena ambony be tokoa.
Farany , hanasinogomibako manoratra hoe:
Satria eo an-tànan'ny fianakavian'ny mpanjaka Koetiana ny fahefana, mampanahy be kokoa ahy ny hahasimba ny fifandraisana am-pirahalahiana.
Mampanahy ahy bebe kokoa hoe ireo firenena aty Afovoany Atsinanana mety hilaza fa tsy hivarotra intsony ny solika avy any aminy ho any Japàna.
Na mandeha mamonjy Lalao Olaimpika aza i Japàna, tsy dia tsara omana loatra hahazo medaily ary resin'i Korea izy tamin'ny lalao fifanintsanana.
Raha ny raharahan'ny lalao Handball, satria vita ny antso niarahan'i Japàna sy Korea nanao, ho ara-drariny kokoa ny amin'ny manaraka.
Zavatra roa misaraka ny fanatanjahantena sy ny politika, saingy raha jerenao ny tantara, misy fifandraisana mivandravandra ao.
(Sary ery ambony: naverina navoaka miaraka amin'ny lisansa GNU )
1 herinandro izayEoropa Afovoany & Atsinanana
3 herinandro izaySyria